A ga-emepe egwuregwu nkwanye ugwu ọhụrụ ugbu a | Androidsis
Sọpụrụ Play bụ ekwentị egwuregwu nke ika ndị China, na anyị nwere ike zụrụ ogologo oge na Spain. Ngwaọrụ a pụtara ntinye akara ndị China n'ahịa a, nke na -aga n'ihu na -eto n'ike n'ike na ọtụtụ nhọrọ. Mmetụta ndị ọ hapụrụ adịghị njọ, yabụ ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ.
N'oge emume a, ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ, Zhao Ming, onye kwupụtara nke ahụ na -arụ ọrụ na Honor Play ọhụrụ. Agbanyeghị na ka ọ dị ugbu a enweghị nkọwa gbasara ọgbọ ọhụrụ nke ekwentị egwuregwu a sitere na ika ndị China. Anyị nwere ike ịhụ na enwere atụmatụ ịtụpụ anyị na otu n'ọdịnihu dị nso.
Enweghi nkọwa ọ bụla, a kwadobeghịkwa ya nke ọma na enwere Honor Play ọhụrụ na -arụ ọrụ ugbu a. Companylọ ọrụ ahụ maara na akụkụ a nke ekwentị egwuregwu na -eto ngwa ngwa, yabụ na ha chọrọ ịbụ akụkụ ya, nke kwere nghọta. Yabụ na ọ gaghị abụ ihe ọhụrụ ka ha na -arụ ọrụ n'ọgbọ ọhụrụ.
Sọpụrụ bụ ika onye ọnụnọ ya n'ahịa na -etoAgbanyeghị ire ahịa ya tara ahụhụ n'ihi nsogbu United States na Huawei, ụlọ ọrụ nne na nna ya. Mana ika ahụ na -achọ ịnwe ọnụnọ n'ụdị ngalaba niile, yana ụdị nwere ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
Yabụ na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya iche na enwere atụmatụ maka egwuregwu sọpụrụ ọhụrụ. Ma ọ dịghị ka ọ dị ihe nlereanya a ga -abata n'oge adịghị anya gaa ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na ị na -arụ ọrụ na ọgbọ ọhụrụ ugbua, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ruo n'afọ ọzọ mgbe a ga -ebido ya n'ahịa.
Yabụ, anyị ga -eche obere oge ka anyị matakwuo gbasara Honor Play a nwere ike ịmalite. Ka ọ dịgodị, ika enweworị ọtụtụ ụdị ọ fọrọ obere ka ọ bịarute. Otu n'ime ndị mbụ anyị ga -amata maka nke ya ọ bụ afọ 20, nke na -abịarute n'izu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Egwuregwu Honor ohuru nwere ike ịmalite
Wepụtara nhazi na nkọwa nke Lenovo A6 Note